Ampitatafika : Zaza 9 taona novonoin’ny raikeliny
Torana ary voatery novelomina teny amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona mihitsy ny renin’ity zazalahikely 9 taona…
… raha nandre fa maty novonoin’ny raikeliny teny an-tranon’ny dadabeny eny Ampitatafika ity zanany ity, omaly.
« Vonoin’ilay vadiko io aho rehefa miady izahay. Nifindra nipetraka tany amin’ny anadahiko aho tao anatin’ny herinandro noho izay toe-javatra izay. Nafindra tany amin’ny dadabeny, eny Ampitatafika ihany koa ilay zanako tamin’ny vadiko voalohany. Noho ny tsy fahitan’ilay lehilahy ahy dia io zanako io no nanamparany ny fony ka izao maty izao », hoy ny renin’ilay zaza, nitantara an-dranomaso teo an-tokontanin’ny hopitaly.
Nirava avy nianatra ny iray tampo tamin’ilay zaza no nahita azy nivalampatra tao an-trano, omaly antoandro. Nilazan’izy ireo ny dadabeny, tany am-piasany kanefa tsy afa-niala tamin’ny asany io ka nasainy niverina nijery raha toa tsy mbola nifoha ilay zaza.
Nandre izany Romuald, anadahin-drenin’ilay zaza sy ny namany iray, ka nandeha niara-nizaha ny zava-niseho teny Ampitatafika. « Zaza efa maty, tahaka ny nokendaina tamin’ny lamba no hitako sy ny mpiara-miasa amiko, tao an-trano. Zaza tsy maninona anefa izy io », hoy i Romuald. Misy diana fery lehibe amin’ny handrin’ilay zaza havanana.
« Lasa nandositra niaraka amin’ny zanany faravavy ilay lehilahy », hoy ihany i Romuald. Zaza telo mirahalahy sy vavy iray no naterak’ireto mpivady ireto. Ilay zaza maty ihany no hafa ray. Milaza hitory ny fianakaviana.